पर्यटन « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
सांसद त्रिपाठीको पहलमा हट्न थाल्यो नागढुंगाको जाम, दीर्घकालिन समाधानको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । देशको राजधानी भित्रिने मुख्यद्वार नागढुंगादेखी गल्छीसम्म पुगेको सडक जामले तीन दिन यता सरकारदेखी सर्वसाधारणसम्मको ध्यान खिचेको छ । करिव ४० किलोमिटर लामो जाममा हजारौं सवारी १० घण्टासम्म रोकिंदा
नेपालगञ्जमा पर्यटन मन्त्री भट्टराईमाथी दुर्व्यवहारको प्रयास, को थिए दुर्व्यवहार गर्ने ? कारण यस्तो छ
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई शनिबार नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्व्यवहारको प्रयास भएको छ । कैलालीको एक कार्यक्रममा सहभागी भएर काठमाडौं फर्कनेक्रममा धनगढीमा विमान छुटेका कारण नेपालगञ्जबाट
यस्ता छन पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका सुधारका सङ्केत
काठमाडौँ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि चालेका कदमको प्रतिफल देखापर्न थालेका छन् ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले सार्वजनिक गर्नुभएको मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रमुख प्राथमिकताका कार्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्वयन
प्रदेश–३ को सरकारले पर्यटन विकासमा ३ अर्ब खर्चिँदै
हेटौंडा । प्रदेश–३ सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पर्यटन विकासको लागि झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । भ्रमण वर्ष–२०२० लाई लक्षित गरी प्रचारप्रसारको कार्यक्रमका साथ
टानको निर्वाचन सम्पन्नः अध्यक्षमा लोकतान्त्रिक समूहका खुमबहादुर सुवेदी निर्वाचित
काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायीहरुको संस्था ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) अध्यक्षमा लोकतान्त्रिक समूहका खुमबहादुर सुवेदी निर्वाचित हुनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न निर्वाचनमा सुवेदीले सत्तारुढ निकटको प्यानलका उम्मेद्वार अञ्जन
मुलुकमा पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गरिने
काठमाडौं । संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मुलुकमा पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । शुक्रबार नेपाल ट्रेकिङ एशोसिएशन (टान) को ४१ औ साधारण सभामा
किन कन्याम मात्र रोज्छन् इलाम पुग्ने पर्यटक ?
इलाम । पर्यटकीय जिल्ला इलामको पर्यायकै रूपपरिचित छ जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित कन्याम । बाहिरबाट आएका धेरै पर्यटकहरू इलाम आएर पनि कन्यामबाट नै फिर्ने गरेका छन । मेची राजमार्गसँग जोडिएको
बरु कम रुख काटिन्छ, निजगढमै बन्छ विमानस्थल, अर्को विकल्प छैनः मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रस्तावित दोस्रो अन्तराष्ट्रिय निजगढ विमानस्थलको विकल्प अरु नभएको बताउनुभएको छ । नेपाल वातावरणमा पत्रकार समूहद्वारा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको
पर्यटन मन्त्री भट्टराईले एक्कासी किन भेटे देउवालाई ? यस्तो छ कारण !
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफुले संहालेको मन्त्रालयको कामका बारेमा जानकारी गराउँदै आवश्यक सल्लाह लिनुभएको छ
टानको अध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका थापाका यस्ता छन प्रतिबद्धता !
काठमाडौं । पदयात्रा व्यवसायीहरुको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन आफ नेपाल (टान)को अध्यक्ष पदका लागि कुमार थापाले उमेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । ट्रेकिङ व्यवसायमा करिव दुई दशक विताउनुभएका थापाल आगामी